Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Africa COVID-19 Maty tampoka ny olona maty
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny rafi-pahasalamana tsy ampy fitaovana any amin'ny firenena afrikana dia iharan'ny tsy fahampian'ny mpiasan'ny fahasalamana, ny kojakoja, ny fitaovana ary ny fotodrafitrasa ilaina mba hikarakarana ireo marary COVID-19 marary mafy.
Ny fahafatesan'ny COVID-19 dia nitombo maherin'ny 40 isan-jato tamin'ny herinandro lasa, nahatratra 6,273, na efa ho 1,900 mihoatra ny tamin'ny herinandro teo.
Ny ankamaroan'ny maty tato ho ato, na 83 isan-jato, dia nitranga tany Namibia, Afrika Atsimo, Tonizia, Oganda ary Zambia.
Ny firenena afrikanina dia miatrika tsy fahampian'ny oksizenina sy fandriana fikarakarana mafy.
Mitombo ny isan'ny maty satria mitombo haingana ny fidiran'ny hopitaly satria iharan'ny tsy fahampian'ny oxygen sy ny fandriana fitsaboana mafy ny firenena afrikanina.
Ny isany dia saro-kenatra fotsiny amin'ny tampon'isa 6,294, voarakitra tamin'ny volana Janoary.
Tonga amin'ny 'teboka vaky'
“Niakatra tampoka ny fahafatesana tao anatin'izay dimy herinandro izay. Ity dia fampitandremana mazava fa ny hopitaly any amin'ny firenena misy fiatraikany dia mahatratra ny fahatapahana », hoy ny Dr Matshidiso Moeti, World Health Organization (OMS) Talem-paritra ho an'i Afrika.
"Ny rafi-pitsaboana tsy ampy famatsiana ara-bola any amin'ny firenena afrikana dia iharan'ny tsy fahampian'ny mpiasan'ny fahasalamana, ny kojakoja, ny fitaovana ary ny fotodrafitrasa ilaina mba hikarakarana ireo marary COVID-19 marary mafy."
AfricaNy taham-pahafatesana tranga, izay ny tahan'ny fahafatesan'ireo tranga voamarina, dia 2.6 isan-jato raha oharina amin'ny salanisa 2.2 isan-jato.